Ekipa YALIS - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
1. Fifandraisana amin'ny tsena: Ny ekipa YALIS R&D dia departemanta fikarohana natokana ho an'ny fampandrosoana endrika, fanavaozana ny rafitra, fikarohana teknolojia ary vahaolana hafa momba ny vokatra. Misy 8-10 endrika endrika vaovao tonga amin'ny besinimaro isan-taona.
2. Mamorona izay tadiavinao amin'ny fomba rehetra: manomboka amin'ny famolavolana drafitra mankany amin'ny fanontana 3D, famolavolana, ataonay antoka fa ny fomba tsirairay dia mamorona amin'ny fomba sy fiheverana.
Mandritra ny famokarana sy ny varotra aorian'ny varotra, dia karakarainay tsara ny fomba tsirairay hanomezana ny mpanjifantsika vokatra sy serivisy avo lenta.
Ny departemanta marketing matanjaka dia mampiroborobo ny orinasan'ny orinasa iray ary mitarika ny varotra ho an'ny vokatra, serivisy ary mitazona mafy ny fizotry ny tsena sy ny mpanjifa. YALIS dia manana ny azy. Tanora feno hafanam-po izy ireo, manara-maso ny tsena indraindray. Miorina amin'ny filan'ny tsena, manome ny paikady amin'ny departemanta fampiroboroboana, varotra ary famokarana izy ireo. Izy ireo koa dia manolotra fanampiana ho an'ireo mpivarotra ambongadiny / agents momba ny fomba fampiasana tsara ny orinasany.
Sampana fiaraha-miasa iraisam-pirenena
Ny sampana fiaraha-miasa iraisampirenena dia mifantoka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpilalao ambony, ao anatin'izany ireo mpaninjara ambony, mpanamboatra varavarana ary mpifanaraka isaky ny tsena sy faritra isam-paritra. Manolotra ny toro-hevitra amin'ny orinasa izy ireo, ary ekipa azo antoka izy ireo ary mendrika ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana ny orinasanao ho avy.
Sampana fanaraha-maso kalitao
Ny fizotrany tsirairay dia fehezin'ny departemanta QC mahery anay, YALIS dia manara-maso akaiky sy manara-maso ny kalitao mandritra ny fizotry ny famokarana sy ny fomba fifidianan'ny mpamatsy. Ny dingana tsirairay dia tsy avelantsika hamidy eny an-tsena ireo vokatra ratsy kalitao. Ny fittings rehetra sy ny singa rehetra dia dinihina tsirairay, mba hahazoana antoka fa tsy mandeha tsara ny tahony rehefa manokatra na manidy ny varavarana.